I-Tunisia. Isimo sezulu ngo-Okthoba. Impendulo nemibono
Izindaba neNhlangano, Isimo sezulu
Ihlobo yisikhathi esingenamkhawulo samaholidi. Abantu bayakujabulela ukushisa nelanga, zama ukusebenzisa njalo imizuzu ukuze uthole imizwa enhle kakhulu futhi ukhumbule ukuthi ilanga elifudumele ilanga nemisebe ifudumele kanjani umzimba nomphefumulo. Abaningi babheke phambili ezinsukwini zasehlobo ukuze bahambisane futhi bajabulele amaholide atholakala emabhishi angaphandle angaphandle. Kodwa ihlobo aliyona yodwa isikhathi sonyaka lapho ungakwazi khona ukufudumala.
Izinzuzo zokuphumula ekwindla
Akekho ophikisa ukuthi ngoJuni, Julayi no-Agasti, kanye namaviki ambalwa ngaphambi nangemva kwalesi sikhathi - yisikhathi esifanele kakhulu sokugeza nokushisa kwelanga. Kodwa ihlobo lehlobo liphuthumayo, kanti izinsuku ezinelanga ziba nomkhuba wokuphela ngaphambi kokuba ziqale. Ngakho kungani ungazami ukukhulisa umuzwa wokufudumala? Kungani ungahlezi amaholide angeziwe, kuyilapho bonke abanye sebevele beqala ukumboza izingubo ezifudumele bese bethatha ikhabethe lebusika.
Khetha indawo efanele yokuhamba ekwindla, ngeke kube nzima. Kunezindawo eziningi lapho isimo sezulu okwamanje sijabulisa ngokufudumala nokushisa kwelanga. Ikakhulukazi kuqondene nalawo mazwe lapho ukushisa kwehlobo ngokuvamile kuvusa amandla, isibonelo iTunisia. Isimo sezulu ngo-Okthoba eNyakatho Afrika sinokunethezeka ngempela. Phela, lena yinyanga lapho isizini se-velvet siqala khona.
Enye inzuzo ebalulekile kuyoba imali enkulu yokulondoloza imali. I-autumn yisikhathi lapho kungekho khona abantu abaningi abafuna ukuphumula, njengasezinyangeni zasehlobo. Ngakho-ke, amahhotela amaningi nezinkampani zokuhamba zenza izaphulelo eziphawulekayo ekuthengeni kwamavoti. Imali, yimuphi umuntu oyedwa ozophumula ngo-Agasti, iyokwanela eziningana ekwindla.
Iholide lomndeni - isipho esingcono kunazo zonke kubathandekayo bakho
Abazali abanezingane ezincane bangahamba ngokuphepha eTunisia ekwindla. Isimo sezulu lapho ngo-Okthoba khona siyakuthandeka ngokunethezeka kwayo. Akukho ukushisa okweqisayo, izinga lokushisa aliphakeme kakhulu, elinomphumela onenzuzo enhlalakahleni yezingane. Ngempela, izinguquko ezibukhali nezinguquko zesimo sezulu kuvame ukuholela ekunciphiseni okukhulu kwabantwana nabantu abadala. Yingakho ama-ejenti amaningi okuhamba atusa ukunaka iTunisia lapho ekhetha ukuvakasha kwesokudla ekwindla.
Isimo sezulu ngo-Okthoba
Ukubuyekezwa kwezivakashi eziye zavakashela le ndawo evelele ekwindla, zigcwele amagama afudumele. Abantu abaningi baqaphela ukuthobeka kanye nesimo sezulu se-velvet, bahlonipha izinga lokushisa kwamanzi nesamba sezithelo ezitholakalayo lapho, sezivele zikhula.
Ukushisa okuphakathi kwamalanga ngokuvamile kufinyelela + ku-25-28 ° C, ngezinye izikhathi kungadlula uphawu lwama-thirty-degree, kodwa lokhu kushisa akukhathali. Inombolo yezinsuku ezinelanga zivame ukuba ngu-25, ngakho-ke kuyoba nesikhathi esanele sokujabulela ilanga, futhi kuzoba nezinsuku eziningi zokuvakasha kanye nokuhamba okulula.
Okthoba yinyanga lapho inani lemvula landa kakhulu ogwini lwase-Afrika. Imvula ingase ihambe, kodwa ifushane futhi ingabi yisithiyo ekuzijabuliseni. Ngakho-ke, into kuphela engakwazi ukuvimbela ukuphumula okuhle kakhulu ezweni elihle yisimo sezulu.
I-Tunisia. Okthoba 2014: amaholide ebhishi, ukuvakasha, ukuzijabulisa
Ukufudumala, kodwa hhayi kushisa kwezulu ekwindla kusiza ukuchitha isikhathi sokunciphisa. Izivakashi zitholakala kokubili amaholidi ogwini nezinyawo. Ungakwenza, ngaphandle kokwesaba ukushisa ilanga nokushisa, sebenzisa isikhathi ogwini. Ukugeza nakho kuvunyelwe, ngisho noma ungabizi ngamanzi "ubisi olunamanzi."
Labo abakhetha ukuzijabulisa okusebenzayo, ngeke bathole izwe elingcono ukucinga okuvelayo kune-Tunisia. Isimo sezulu ngo-Okthoba sinokuhamba okude, ukugibela amakamela kanye nokuhamba ogwadule.
Izivakashi zihlinzekwa ngezindawo zokubhuka zaseCarthage, uhambo lwe-jeeps oluya eSahara, ukuhlolwa kwamapaki kazwelonke wendawo. Izinhlobonhlobo ze-scuba diving zingabheka phansi kweMedithera, zijabulele ubuhle bayo.
Indawo lapho ungazitholela khona ukwelashwa kahle, ukwelashwa kwodaka kanye nokuhlanganiswa kwezidakamizwa yiTunisia. Isimo sezulu ngo-Okthoba lapha simnandi kakhulu. Imvula evamile kanye nokupholisa okuncane uma kuqhathaniswa nenkathi yehlobo yishiya isikhathi esanele sokukhululeka kokuphumula kwebhishi esebenzayo, kanye nemisebenzi yezithokozi.
Ukuya ehhotela kule ekwindla kunezinzuzo zombili nezimo eziyingozi. Kukhona njalo ingozi yokushisa kwezulu kanye nenkathi yemvula. Kodwa isimo sezulu asikwazi ukubikezela, futhi awukwazi ukuthembela kuso ngokuphelele. Kunoma yiluphi uhambo udinga ukuhamba nomoya omuhle, ulindele ukubona ama-landscape amasha, ufunde amaqiniso athakazelisayo emlandweni wezwe kanye nesifiso sokushintsha isimo nokuphumula. Khona-ke akukho zithiyo eziyobe zimbi. Akusilo lutho abakushoyo: "Imvelo ayinayo isimo sezulu esibi. Njalo isimo sezulu siyisibusiso. "
Ukucindezelwa kwamanzi: kuvamile
IGibhithe: sezulu ngezinyanga. Hurghada: sezulu izinyanga, ukushisa kwamanzi
Iyini i-flax emhlophe? Izakhiwo eziwusizo, incazelo kanye nesicelo
Izikhonzi amasiko umthetho - Iyini? Concept, ngezigaba
Preparat'Dyufaston ': yokusetshenziswa.
HP-laptops. Ukubuyekeza, izincazelo kanye neminye imininingwane ewusizo kwi-inthanethi azosiza ukwenza ukuthenga
Anime "Psihopasport": izinhlamvu. "Psihopasport": nabalingiswa abasemqoka nalabo amagama abo
Kanjani ukwakha design eyingqayizivele sangasese endlini egcekeni
Foreign comedy romantic: uhlu amabhayisikobho engcono